By AxadleTM On Dec 15, 2019
MUQDISHO, Soomaaliya – Hogaamiyaha Xisbiga Wadajir, C/raxmaan Cabdishakuur Warsame ayaa faallo ka qoray doodaha ka taagan doorashadda Soomaaliya ee 2020-2021, iyadoo laga digayo mudo-korarsi sharci darro ah, oo ay sameeyaan madaxda hadda haysa talada dalka.
Sharciga cusub wuxuu meesha ka saaray in cod-bixintu ay noqoto hal doorasho deegaan (single constituency), oo wuxuu soo jeedinayaa doorasho deegaan ku saleysan maamul goboleedyada haatan jira (multiple constituency), wuxuu kaloo meesha ka saaray in doorashada lagu saleeyo nidaamka matalaadda nisbada liiska xiran (Proportional Representation, PR – Closed list) oo la dooranayo Xisbiga oo keliya, Xisbi walbana loo xisaabinayo codadka guud ee uu helo, xisbiguna uu go’aaminayo liiska murashaxiinta xisbiga iyo siday ku soo baxayaan, wuxuuna soo jeediyey nidaamka loo yaqaan horreeyaa guuleysta (First Past The Post “FPTP”) oo lagu kala baxo codka hal-dheeriga ah ee tartanka kursi deegaanka iyo liiska furan oo ah in aan loo hoggaansamin sidii liiska doorashada horteed loo dejiyey, magacyaduna u kala horreeyeeen.
Wuxuu kaloo meesha ka saaray in Madaxweynaha uu ka imaanayo Xisbigii hela 50+1 xildhibaannada Baarlamaanka, taasoo khilaafsan qodobka 89aad ee Dastuurka.
Doorasho qof iyo cod ah waa in shacabku si toos ah oo xakameyn la’aan ah ugu codeeyaan ciddii ay doonaan oo si madax-bannaan ama Xisbi ka socda ee u tartamaya kuraasta Baarlamaanka.
Haddiise kuraasta Baarlamaanka la sii kala suntado oo 275 ka kursi beelihii kala lahaa ay sidoodii u kala leeyihiin, muwaaddinkuna uu kala dooranayo musharraxiinta beesha oo keli ah, lama oran karo waa doorasho qof iyo cod ah, laakiin waxay noqon kartaa doorasho toos ah oo aan ahayn mid dadban.
Laakiin sharciga dooddiisu ay haatan Baarlamaanka ka socoto waa doorasho toos ah, laakiin ma aha qof iyo cod. Keliya hannaan doorashadii 2016 kii waxaa lagu soo kordhiyey dhowr qodob oo la oran karo waa horumar iyo tallaabo horay loo qaaday, waxaana qodobbadaas ugu muhiimsan:
Tuhunka hannaankaas laga qabo ayaa ah in Farmaajo uu is leeyahay maaddaama amniga dalka waxba laga qaban, ayna adag tahay in doorasho deegaan dalkoo idil laga hirgeliyo in duruufaha amni dartood doorashada kuraasta ugu badan lagu qabto magaalada Muqdisho, halkaasna ay ka codeeyaan waxa loogu yeero xoogagga waddaniyiinta, kuwaasoo uu horay u diyaarsaday.
Cod-bixiyuhu weli waa xanniban yahay, laakiin wuxuu xor u yahay in uu kala doorto qabiilka. Doorashada qof iyo codka ah ee hannaanka dimoqraadiga ah cod-bixiyuhu deegaan doorasho kiisa dhaafsiisan kama codayn karo, laakiin cidii uu doono ayuu kursiga u go’aamin karaa.
Maaddaama cod-bixiyaha uusan oday dhaqan soo xulaynin ee uu toos isku diiwan-gelinayo, waxaa la oran karaa cod-bixintu waa mid toos ah.
(GMDQ) iyo Xafiiska Qaramada Midoobay ee Soomaaliya (UNSOM) in ay iska daayaan dhalanteedka ah in la qabanayo doorasho qof iyo cod ah, ee loo soo wada jeesto sidii loo qaban lahaa doorasho toos ah oo xilligeeda ku dhacda.
Haddaba Haddii meel la iska dhigo damacyada waalan, lana xeeriyo danta shacabka, xasilloonida dalka iyo dowlad dhisidda Soomaaliya, waxaa abuurmaya jawi looga wadashaqeyn karo sidii loo qaban lahaa doorasho la isku raacsan yahay oo is-oggol iyo isla-guddoon ku dhisan.
W/Q: Cabdiraxmaan Cabdishkuur Warsame, hogaamiyaha Xisbiga Wadajir